GRAPHENE - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
BARNAAMIJKA, Ujeeddo Ujeeddo Badan
Graphene waa shey cusub oo isbedel ku sameyn doona waxa aan dharka u isticmaalno.
Hore loogu xusay maqaalkeenna ku saabsan dharka cusub, graphene wuxuu sii wadaa inuu buuq dhaliyo. Iyo sabab wanaagsan. Waxaa soo saaray 2004 labo cilmi baare oo ka tirsan jaamacada Manchester, André Geim iyo Konstantin Novoselov, oo la siiyay abaalmarinta Nobel Prize ee Fiisigiska sanadkii 2010, qalabkan cusub ee aan horay loo arag wuxuu ku faanaa waxyaabo fara badan oo gaar ah.
Qaadashada qaabka hal lakab oo ah atamyo kaarboon ah oo lagu diyaariyey hannaan malab, graphene wuxuu ku yimaadaa qaab saafi ah, iyada oo aan lagu darin waxyaabo ama kiimiko. Waxaa lagu habeeyay gogol-xaashiyo isku laaban, dusha sare iyo la beddeli karo iyo astaamaha kuleylka iyo korontada waxay ka dhigeysaa murashax ku habboon is-dhexgalka dharka, marka lagu daro adeegsigiisa deegaanka, maaddaama graphene uu nuugo hydrocarbons iyo walxaha dabiiciga ah
Graphene waxaa lagu tilmaami karaa inuu yahay lakab hal-atom qaro weyn leh oo garaaf ah. Waa qaybta aasaasiga ah ee qaab dhismeedka kale, oo ay ku jiraan garaafka, dhuxusha, nanotubes kaarboon iyo fullerenes. Waxaa sidoo kale loo tixgelin karaa inay tahay maaddooyinka udgoon ee aan xadidneyn, kiiska xaddidan ee qoyska ee hydrocarbons aromatic polycyclic flat. Cilmi-baarista Graphene si dhakhso leh ayey u ballaarisay tan iyo markii walaxda markii ugu horreysay la go'doomiyay 2004. Cilmi-baarista waxaa lagu wargaliyay sharraxaad aragtiyeed oo ka kooban halabuurka, qaab-dhismeedkiisa iyo dhismooyinkiisa, kuwaasoo dhammaantoodba la xisaabiyey tobanaan sano ka hor. Graphene-tayo sare leh ayaa sidoo kale cadeeyay inay si layaab leh u fududahay in la go'doomiyo, taasoo ka dhigeysa cilmi baaris badan. Andre Geim iyo Konstantin Novoselov oo ka tirsan jaamacadda Manchester ayaa ku guulaystay abaalmarinta Nobel Prize ee Fiisigiska sanadkii 2010 “tijaabadii cusbayd ee la xidhiidha maadada graphene oo laba-cabbir leh.
Dharka Graphene-dahaarka leh ayaa lagu helay dhimista kiimikada ee graphene oxide. Dhar sameynta ayaa la helay iyadoo la adeegsanayo dhowr daahan graphene. Qalabka elektaroonigga ah ee 'spectroscopy improdance spectroscopy' wuxuu muujiyay dhaqanka hagaya ee dharka. Heerka iskaanku waa halbeeg muhiim u ah astaamaha lagu yaqaan voltammetry cyclic. Baadhitaanka mikroskoobka elektiroonigga ayaa muujiyay kororka korantada.